Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo bayaan kasoo saaray xaaladda Puntland (Dhegaysi+Akhriso) – Radio Daljir
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo bayaan kasoo saaray xaaladda Puntland (Dhegaysi+Akhriso)
Diseembar 13, 2012 12:22 g 0
Garowe, Dec, 13 – Xildhibaan Cabdulqaadir Faarax Bootaan oo kamid ah Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ?ayaa maantay shir-jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ?waxaa uu kaga waramay dhammaan caqabadaha xilligaan ka taagan gobollada Puntland.
Xildhibaanka ayaa oo warbixinta ay wada diyaariyeen xildhibaan kale oo lagu magacaabo Xildhibaan Maxamed Cali (Karaad) ayaa warbixintoodu u qoray sidan hoose.
Annagoo xubno ka ah Golaha Wakiillada Puntland, ee ah golaha ugu sarreeya golayaasha hay?adaha dawladda, waxaa noo muuqatay inaan xaaladda ay marakan Puntland ku jirto sida ay tahay looga aammusnaan karin, ifafaalaha muuqdaana uusan saamixi karin in siduu yahay lugu sii fiirsado.
Taas darteed, waxaan jeclaysannay inaan halakan ku soo gudbinno aragtidayada ku aaddan waayaha dhabta ah ee aynu Puntland ahaan ku jirno, inkastoo aysan mas?uuliyiin ahaan noo billayn arrimaha xasaasiga ah inaan ku sii tiiganno, waana wax gar inaan ka faaganno.
Waxaan kaloo haddii Alla idanka ka dhigo ku soo jeedineynaa la-ahaanshahayaga bal sida xal munaasiba oo miyir qaba arrimaha taagan loogu mitimin lahaa.
Waxaa Xildhibaanno ahaan noo muuqatay inaan halakan ku soo qaadanno arrimo dhawr ah oo aan layska indhatiri karin, annagoo ka duuleyna;
Mas?uuliyadda ummaddu noo xambaarisay.
Wakaaladda ay ummaddu nagu aammintey.
Waddaniyadda aannu u dhalannay iyo dhaartii na loo marshey inaan daacad ugu adeegno maslaxadda dalka iyo dadka Reer Puntland.
Arrimahaan doorka bidnay inaan soo qaadannaa waa;
Markaan u kuurgalnay xaaladda guud ee Puntland, oo dhinacyada siyaasadda, amniga iyo xasilloonida, dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka, tusaalooyinka ina ka shaafiyi karaa waa kuwaan hoose.
A- Siyaasadda heeladka, Soomaaliya aynu la wadaagno, iyo dibedda ? Sidii loo soo afjaray Tubtii khariidadda ee Soomaaliya ku-meelgaarnimada looga saarayey, Puntlandna ay qayb-libaax ka soo qaadatay, waxay teennii dhinacyadaas khuseysey marakan ku dambeysey mid garbaduuban oo miisaankeedii lumisay, dhaqdhaqaaq la taaban karaana uusan ka muuqan.
B- Siyaasadda Gudaha ? Tan kore waxay taabbagal noqon lahayd tan guduhu markay maddo lugu qanacsan yahay haysato, bulshadeeda u adeegeyso ayna ku qanacsan tahay Taas iska daaye, iyana waxay noqotay mid calowdey oo tillaabooyinka la qaadayaa ay lahan hor leh sii kicinayaan.
C- Waxaa abuurmay buuq siyaasadeed oo gobolladii oo dhan hareeyey, jaalliyadii dibeddana saamayn weyn ku yeeshay. Waxaa si isdabajooga u soo baxaya baaqyo ay bulshadu aragtideeda iyo waxay aamminsan tahay ku cabbirayso, ayna tahay inaan dhegaha laga furaysan. Gobollada Bari, Karkaar, Nugaal iyo Mudug, iyo Jaalliyadaha Puntland ee Austria, Australia iyo Norway ayay baaqyadu ilaa hadda ka soo bexeen, iyo kuwo ay siyaasiyiin soo saareen.
Markaan been la eexsanayn amni-xumo iyo xasillooni-darro labaduba dunida way ka jiraan oo cid ka fayoobi way yar tahay, hayeeshee innagu waxaynu dheerrahay qabasha la?aan, dabaggal la?aan, caddayn la?aan, xuuraan la?aan ee dilalka qorshaysan, iyo bulshadii oo kalsoonidii amni ka luntay.
Iska daa meel kale, Caasimaddii Dawladda ee Garoowe iyo magaalooyinkii ganacsiga ee Boosaaso iyo Gaalkacyo ayaan dhiigga birimageydada iyo muwaaddiniinta Puntland ka qallalin, siiba; Xildhibaannada, Wasiirrada, Saraakiisha, Culummada, Nabaddoonnada iyo Waxgaradka.
Bannaanbaxyada rabshadaha wata ee waddanka ka bilawday iyo xabbadaha nool oo ciidammadu ku jawaabayaan oo dhaawaca geystey, tii Qardho ka dhacay, waa midaan bulshada munaasab u ahayn oo looga abaaldhacay, waana ifafaalo xasilloonidarro ku wacnaan kara. Gooddiga, handadaadda cabsigelinta iyo cabburinta warbaahinta waddaniga ah ayaan wax ku sii xumaada maahee waxba ku hagaageyn.
Dadka iska xirxiran oo aan maxkamad la hor keenin ayaa ah wax aan caddaaladda meelna kaga abtirsan, xasilloonidarrana qayb ka noqon karta.
Mushaarka joogtada loo la? yahay, oo sida badan bilaha qaata, oo ciidammada iyo shaqaalaha dawladda la qaayibsiiyey ayaa iyana xasilloonidarrida hiil u noqon kara, haddaan caqligu shaqayna, waxay dhammaan sii cayilin karaan xasillooni baahda.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa; ? Balaayo daaman la qabtay leedahaye dabo la qabto ma leh?.
Koboca dhaqaaluhu waa mid hungo ah, siyaasad lugu horumarinayo lama hayo?layskumana deyin. Warshado yaryar oo dawladdu leedahay iyo kuwo ay qayb ka tahay toona, oo weliba ay saami yar ku leedahay, waddanka intaan ognahay lagama hirgelin, ganacsatadana laguma dhiirrigelin. Xoolaha nool oo ugu ballaaran dhaqaalaha Soomaalidu ku tiirsan tahay iyo manfacooda kale, khayraadka badeheenna kala rogan ( Badda Cas iyo tan Hindiya), Maydiga Puntland maahee aan adduunyada kale laga helin, Beeyada noocyada badan iyo xabkeheenna Malmalku ka mid yahay ayaan iyana loo dejin qorshe dhaqaale-qaran ka qaybqaata. Kaabayaasha dhaqaalaha ee waddooyinka dalka isku xira, garoommada diyaaradaha, marsooyinka iyo dekadda keliya oo layna ku arko ee Boosaasood ayaan waxba laga qaban, xafaarad ay hay?adi dekadda mar ku samaysay mooyaane.
Soomaaliya intaysan burburin magaalada Gaalkacyo waxay ahayd xarunta kulmisa badeecadaha dhinac kasta Soomaaliya ka soo dega badankood, taasoo ay ku mutaysatay bartamaha ay ku taal iyo tubta isle?eg oo ay Mugdisho, Boosaaso iyo Hargeysa midba u jirto. Dekadda Boosaaso ayaa taniyo waa dhaweyd ku caambaxday mashquulka xoolaha iyo khayraadka kale oo ka dhoofaya iyo badeecadaha adduunyada daafeheeda ganacsiga looga keeno. Dekadda Boosaaso waxay ahayd meel ay ganacsatada Soomaaliya oo dhammi waxna ka dhoofsato waxna ka soo rogto, taasoo ay ku wacnayd siyaasadda ganacsi oo Puntland ku socotey.
Maanta ganacsigii tabtaas ahaa wuxuu ku dambeeyey inuu hagaasoobey oo dhinacya kale u wareegey. Iska daa ganacsato gobollada kale ka tirsane kuwii Reer Puntland ayaa badankood dekado kale badeecadohoodii ula wareejiyey.
Dawlad-Degaanka Soomaalida ee Ethiopia wuxuu ganacsigu kala dhexeeyey oy weligood toos isugu xirnaayeen Puntland, iyaga ayaana u horreeyey ganacsiga weecday.
Saddexduba waxay sababsadeen isku cillad aan mas?uuliyaddeeda la wadaagin.
Ganacsigeenna waxaa ina kaga filan Arrafadii dhaweyd oo 250,000 oo neef ee keliyihi, sida warbixinta lugu hayo Golaha hortiisana laga soo jeediyey, ay Dekedda Boosaaso ka dhoofeen.
Bulshada Puntland nolosheedu waxay sida badan ku tiirsan tahay xoolaha ay dhaqdaan iyo waxay iibsigooda ka helaan, suugyada gudaha iyo dibedda. Xeebihii ay kalluumaysatadu ka jillaaban jirtey bay maraakiibta sidata shamaagaha xaaraanta badaha in lugu xaaqo ka ahi ay u xoog-sheegteen. Rogrogoshada badeecadaha, gaadiidka iyo meheradaha ayaa ah meelaha dadku u baxsaday, waana ilaha ay dawladdu canshuurta uusan dadweynuhu xadkeeda qaadi karin ka hesho. Mushaar joogta ah oo lugu tiirsan yahay oo xisaabtan-gal ahi ma jiro, ciidan iyo shaqaakaba. Waddanku shaqo-abuur ma leh, xirfado lugu xoogsadana dadweynaha looma jahayn. Qarashka Isgaarsiinta, Jacda(Korontada), biyaha iyo adeegga dugsiyada ayaan dadka intiisa badi heli karin. Ehel iyo aqoonniba dadku wuu isku dul nool yahay, waana wada qarraac iyo maqadaan-madhergaan aysan u muuqan dawlad iskutaxallujinaysa siday xal ugu heli lahayd dhibta dadkeeda haysta.
Waxaa laga yaabaa inay bulshadu Golaha Wakiillada aad ugu darraabayso arrimaha murugsan iyo qodobbada sida kooban halakan loogu soo qaaday. Hayeeshee, Golaha Wakiillada Puntland wuxuu in badan arrimahaas kala hadlay waxqabadkoodana qoraallo ugu gudbiyey Golaha Xukuumadda, hase ahaatee ma jiraan tillaabo lugu qaracsan yahay oo xukuumaddu fulinteeda u nuglaatey. Golaha Wakiillada waajibaadkiisa ayay ka mid tahay inuu Golaha Xukuumadda hawlaha loo igmaday oo uu xasaanadda ku siiyey ku dabagalo kalana xisaabtamo.
Waxaan la inkiri Karin afartii sanoo xukuumadda Puntland ee hadda jirtaa ay hoggaanka haysey inay wax qabatay, haddana arrimahaan soo sheegnay oo dhammi waa kuwii fulintooda looga fadhiyey, waxaana qori doonta BEEN-MA-SHEEGTADA (Taariikhda).
Haddaba, ma ah in wakhtiga laysaga qaado oo lugu mashquulo afar sano iyo shan sano toona oo dadka iyo xukuumaddu isku hayaan, maxaa yeelay badbaadinta Puntland baa labadaba ka muhimsan.
Doorashada ? ururrada iyo xisbiyada
Waa wax wanaagsan in doorasho iyo dimoqraadiyad loo gudbo, waana waxa uu Golaha Wakiilladu Guddiga Doorashooyinka xasaanadda u siiyey, hayeeshee waxaa sharciyadda loo siiyey inay tubta dimoqraadiyadda qaadaan. Taasi ma aha wax mugdi geli karta dadkana laga indhasaabi karo.
Inaan dariiqadii dimoqraadiyadda lahayn, oo dastuuriya ah, waxaa inoo kaga filan:
Iyadoo uusan jirin xeer kala qeexaya Puntlanderka iyo kaan ahayn.
Iyadoon dadweynaha Puntland tirakoobkiisaba la hayn.
Iyadoon weli dadweynaha loo samayn aqoonsi iyo sugnaan muwaaddinka caddayn u ah.
Iyadoo aan la kala soohdimeyn degmooyinkii qaran-jabkii Soomaaliya kadib la dhisay iyo kuwii hore u jirey.
Iyadoo gobolladii Puntland ka koobnayd aysan dawladdu ka wada talin.
Iyadoo aan qoriga cid gaarihi u talin, oo askar iyo shacabba la wada hubeysan yahay.
Goortaan marxaladda dhinac kale istaagno,
Markaan miisaan dhab ah saarnay siday u wiiqantay midnimadii iyo wadajirkii bulshada Puntland;
Markay xaqiiqa tahay inay dhawaan gacanta ka bexeen degaammo hor leh oo ciiddeenna ka mid, maamul kalana uu hantiyey;
Markaan dhegaha laga furaysan karin dhawaaqa qaybaha bulshada, oo cod iyo qoraalba ay ku cabbirayaan aragtidooda ku wajahan xaaladda Puntland, kulammo isdabajoogana ay kaga doodayaan marxaladdaan qallafsan.
Markay xaqiiqowdey Isimmadii Reer Puntland oo aasaaskeeda qaybta libaax ka qaatay qaarkood in loo diidey garoommada Puntland inay ka dhoofaan ama ka soo degaan, taasoo taariikhda Puntland cawaaqibxumo iyo bar madow ku reebeysa;
Waxaan soo jeedineynaa:
Inuu qaanuunku cid kasta ka sarreeyo, ayna lagama maarmaar tahay in loo wada hoggaansamo.
Inay xaaraan tahay xabbad xal lugu raadsho oo Puntland khalal gelisa.
In si taxaddaran oo miyir iyo xasillooni leh, caqli u saaxiiba, wadatashi iyo kala garqaadasho cuskan, waddaniyadina saldhig u tahay xaaladda Puntland lugu wajaho.
Isimmada Puntland oo ah bud-dhigayaasha dawladnimada Puntland, taniyo burburkiina bulshada isku hayey, isla markaasna dhaqan ahaan ah marjaca badbaadada Reer Puntland iyo ka arriminta marxaladaha qallafsan ee soo wajaha inay xaaladdatan taagan iska arkaan, kaalintoodii shariifka ahaydna ugu adeegaan.
Caawa iyo Daljir Dec 13-2012, Khadar Cawl Ismaaciil ( Daljir Buuhoodle )
Ururka Midnimo oo Xukuumadda Puntland ugu baaqay inay wada hadal ka gasho mudo kororsiga (Dhegayso)